Mareykanka Oo Baadhaya Haweeney Saldhigga Hawada Sare Ku Jabsatay Bangi Uu Leeyahay Nin Ay Kala Tageen | Himilo Media Group
Mareykanka Oo Baadhaya Haweeney Saldhigga Hawada Sare Ku Jabsatay Bangi Uu Leeyahay Nin Ay Kala Tageen
Washington, 25 August, 2019 (Himilo)-Hay’adda howlaha hawada sare u qaabilsan Mareykanka ee lagu magacaabo Nasa ayaa lagu soo warramayaa inay baadhitaan ku bilowday sheegasho ku aaddan in haweeney tagtay saldhigga caalamiga ah ee hawada sare ay jabsatay bangiga uu leeyahay nin ay hore xaaskiisa u aheyd.
Ninka ay kala tageen gabadhan oo lagu magacaabo Summer Worden, ayaa lagu soo warramay inuu cabasho u gudbiyay waaxda ganacsiga ee federaalka Mareykanka.
Iyadoo adeegsaneysa qareenkeeda ayey u sheegtay wargeyska New York Times inay hubineysay oo kaliya in bangiga ninkeedii hore ay ku jirto lacag ku filan howlaha qoyska, maadaama isaga laga rabo inuu bixiyo kharashka ku baxa reerka iyo lacagaha lagu xannaaneynayo wiilka ay dhashay.
Qareenkeeda ayaa yidhi, “Waxay si xoogan u dafirtay inay sameysay wax sharciga kasoo horjeeda”.
Ms McClain iyo Mr Worden, oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka ciidammada cirka ayaa isguursaday sanadkii 2014-kii.
Mr Worden ayaa furriin dalbaday sanadkii 2018-kii, xilligaas oo ay isla korinayeen ilmahooda yar.
Dambi baadheyaasha hay’adda Nasa ayaa xidhiidh la sameeyay labadooda, waxayna wax ka weydiiyeen eedeymaha lasoo jeediyay, sida uu sheegay wargeyska New York Times.
Waxa hawada sare ku yaalla shan saldhig oo caalami ah, kuwaasoo ay kala leeyihiin Mareykanka, Canada, Japan, Ruushka iyo dhowr dal oo Yurub ka tirsan.
Dhammaantood waxa la xaqiijiyay in uu si toos ah uga hirgalo sharciga qaranka ee uu leeyahay dal kasta, qof walba oo khalad halkaas ku sameeyana wuxuu la mid yahay sida sida qof dhulka jooga.
Sidaasi awgeed, haddii qof u dhashay dalka Canada uu dambi ku sameeyo saldhigga hawada sare, waxa la waafajinayaa sharciga Canada, haddii qof u dhashay Ruushka uu dambi ku galo isla halkaasna waxa la waafajinayaa sharciga ka jira dalka Ruushka.